SAWIRRO: Arsenal oo war Farxad leh helaysa – Gool FM
SAWIRRO: Arsenal oo war Farxad leh helaysa
Byare March 26, 2018
(London) 26 Maarso 2018. Arsenal ayaa helaysa aqbaar farxadeed kaddib markii ay tababarka safka koowaad dib ugu soo laabteen xiddigaheeda weerarka iyo qadka dhexe kaga ciyaara ee Alexandre Lacazette iyo Aaron Ramsey.
Labada xiddiga ayaa soo maray qalliin ka hor inta aysan ka soo kaban dhaawacyada ay qabaan.
Ramsey ayaa qaliin looga sameeyay Gumaarka halka dhaliyaha reer France laga qalay Jilibka.
Xiddigaha Muhiimka u ah shaxda Wenger ayaa looga tagay London maadaama ay dhaawac uga hareen xiddigihii u baxay kulamada caalamiga ee xulalkooda, balse tababarka ayay ku soo laabteen waliba midka safka hore.
Ramos oo waydiistay madaxwaynaha Real Madrid inuu kooxda keeno laacib ka tirsan Chelsea iyo Perez oo aqbalay (Ma ahan Hazard iyo Courtois)
GOOL GOOL DHAAFAY: Daawo Ma u Qalmaa Puskas Award 2018